“ခံစားဖူးသူတိုင်း သိတဲ့ အွန်းလိုင်းရှော့ပင်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာအချို့” – ရှအေလငျး
“ခံစားဖူးသူတိုင်း သိတဲ့ အွန်းလိုင်းရှော့ပင်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာအချို့”
ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာတဲ့နောက် လူတော်တော်များများဟာ အွန်လိုင်းကို အားကိုးပြီး freelance အဖြင့် အွန်လိုင်းရှော့ပင်ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်လာကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်က ကြိုက်လို့ မှာယူလိုက်ပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ပုံကတစ်ခြားရလာတာက တစ်ခြား စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေက တစ်ခြာစီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သင့်အတွက် ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အပြင် စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့သာ ကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းရှော့ပင်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဝယ်ယူသူကြား မကြာခဏဆိုသလို ပြဿနာတွေတက်လိုက်၊ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လိုက်နဲ့ ခဏခဏကြုံတွေ့ရပါတယ်။ အခုလည်း အွန်လိုင်းက မှာယူလို့ ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေက ဝယ်ယူသူအတွက်တော့ စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်နေပေမဲ့ ဘေးကကြည့်သူအတွက်တော့ တကယ့်ကို ရယ်ရွှင်စရာပါ။
၁။ Fit Size ပါပဲ ခြေထောက်တစ်ချောင်းပဲ ဝတ်ရင်ပေါ့။
၂။ ဘယ်လိုတောင်လား အစ်မရယ်။ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။
၃။ ကိုယ်ကပဲ ကိတ်နေလို့လား။ အင်္ကျီလေးရယ်….
၄။ အမေလည်း အွန်လိုင်းရှော့ပင်နဲ့တွေ့မှ ဂျင်းထည့်ခံရတယ်။
၅။ ဂျင်းဘောင်းဘီလား ခြေအိတ်မှာလိုက်တာလား ကိုယ့်ကိုကိုယ်မသဲကွဲဘူး။
၇။ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့ မျက်နှာဖုံးထက်တောင် ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းနေသေးတယ်။
၈။ အမေက တူလေးအတွက် ကျောပိုးအိတ်ဝယ်ပေးတယ်တဲ့ အွန်လိုင်းက
၉။ ဝယ်တာဝယ်လိုက်ရတယ် တော်ပါ့မလား။
၁၀။ ခြေထောက်သုတ်ဖို့ ဝယ်လိုက်တာ ရလာတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ တို့ပတ် သာသာလေး
၁၁။ အဖေ အွန်လိုင်းက ဖိနပ်မှာလိုက်တာတဲ့။
၁၂။ အခန်းအတွက် ကော်ဇော မှာလိုက်တာ ကစားစရာနဲ့မှားရောင်းလိုက်လားမသိဘူး။
၁၃။ လူ ဝတ်ဖို့ မပြောနဲ့ ကြောင်နဲ့တောင် အဆင်မပြေဘူး။
၁၄။ ဒါကတော့ လူတွေကို သပ်သပ်ဂျင်းထည့်ပြီး လိမ်းရောင်နေကြတာ။
Credit: #Lifestyle_Myanmar ( #Thar_Nage )
ကိုယျပိုငျဆိုရှယျမီဒီယာတှေ ခတျေစားလာတဲ့နောကျ လူတျောတျောမြားမြားဟာ အှနျလိုငျးကို အားကိုးပွီး freelance အဖွငျ့ အှနျလိုငျးရှော့ပငျကို တဈပိုငျတဈနိုငျလုပျလာကွပါတယျ။ အှနျလိုငျးမှာတငျထားတဲ့ပုံကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျက ကွိုကျလို့ မှာယူလိုကျပမေဲ့ အှနျလိုငျးမှာတငျထားတဲ့ပုံကတဈခွားရလာတာက တဈခွား စိတျကူးနဲ့ လကျတှကေ တဈခွာစီးဖွဈဖွဈနတေဲ့အတှကျ သငျ့အတှကျ ကနြေပျမှုမရှိတဲ့အပွငျ စိတျဆငျးရဲမှုနဲ့သာ ကွုံတှနေ့ရေမှာဖွဈပါတယျ။ အှနျလိုငျးရှော့ပငျလုပျတဲ့သူတှနေဲ့ ဝယျယူသူကွား မကွာခဏဆိုသလို ပွဿနာတှတေကျလိုကျ၊ အဆငျမပွမှေုတှဖွေဈလိုကျနဲ့ ခဏခဏကွုံတှရေ့ပါတယျ။ အခုလညျး အှနျလိုငျးက မှာယူလို့ ရရှိလာတဲ့ပစ်စညျးတှကေ ဝယျယူသူအတှကျတော့ စိတျညဈစရာ စိတျဆငျးရဲစရာဖွဈနပေမေဲ့ ဘေးကကွညျ့သူအတှကျတော့ တကယျ့ကို ရယျရှငျစရာပါ။
၁။ Fit Size ပါပဲ ခွထေောကျတဈခြောငျးပဲ ဝတျရငျပေါ့။
၂။ ဘယျလိုတောငျလား အဈမရယျ။ စိတျတောငျမကောငျးဘူး။
၃။ ကိုယျကပဲ ကိတျနလေို့လား။ အင်ျကြီလေးရယျ….
၄။ အမလေညျး အှနျလိုငျးရှော့ပငျနဲ့တှမှေ့ ဂငျြးထညျ့ခံရတယျ။
၅။ ဂငျြးဘောငျးဘီလား ခွအေိတျမှာလိုကျတာလား ကိုယျ့ကိုကိုယျမသဲကှဲဘူး။
၇။ အှနျလိုငျးမှာတှတေဲ့ မကျြနှာဖုံးထကျတောငျ ပိုပွီးကွောကျစရာကောငျးနသေေးတယျ။
၈။ အမကေ တူလေးအတှကျ ကြောပိုးအိတျဝယျပေးတယျတဲ့ အှနျလိုငျးက
၉။ ဝယျတာဝယျလိုကျရတယျ တျောပါ့မလား။
၁၀။ ခွထေောကျသုတျဖို့ ဝယျလိုကျတာ ရလာတော့ မိတျကပျလိမျးတဲ့ တို့ပတျ သာသာလေး
၁၁။ အဖေ အှနျလိုငျးက ဖိနပျမှာလိုကျတာတဲ့။
၁၂။ အခနျးအတှကျ ကျောဇော မှာလိုကျတာ ကစားစရာနဲ့မှားရောငျးလိုကျလားမသိဘူး။
၁၃။ လူ ဝတျဖို့ မပွောနဲ့ ကွောငျနဲ့တောငျ အဆငျမပွဘေူး။
၁၄။ ဒါကတော့ လူတှကေို သပျသပျဂငျြးထညျ့ပွီး လိမျးရောငျနကွေတာ။
ကလေးတွေကို ချစ်ရင် ခိုင်းပါ အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးတွေကို ခိုင်းသင့်တဲ့ အလုပ်လေးများ 👍👍👍
တက္ကစီအား ဓားဖြင့်​ခြိမ်းခြောက်​ငွေတောင်းသူ နှစ်​ဦးမှတစ်​ဦး အားဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ …ပထမဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ …အဆင့်မြင့်ဘတ်စ်ကားတွေကို… ပြည်ပ တင်ပို့ရောင်းချမည်
” မာန်အောင်မြေက ပရိသတ်တွေကို ” လရောင်ချော့တေး ” …သီချင်းလေး နဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ နေတိုး ရဲ့ ဗီဒီယို “
မူးယစ်မှောင်ခိုသမား(၃)ဦးကို တရုတ်တရားရုံးက လူမြင်ကွင်းမှာသေဒဏ်ပေးခဲ့
လက်ထဲ ၆၅သိန်းလောက်ရှိရင် ကားသစ်စီးနိုင်တော့မယ်
“Victoria လေးအတွက်သာမက သူလေးအတွက်ပါ ဝန်းရံ ပေးကြပါ..ကလေးက ၁နှစ်နဲ့ ၈...